Halkee laga helaa backlinks ka soo jiidashada joornaalada?
Maalmahan, joornaaladu waxay sii wadaan in badan oo ka sii caan ah. Dhab ahaan, kuwan sawirada indhaha leh oo leh macluumaad faa'iido leh ayaa lagu qiyaasay inay noqdaan 30 jeer oo ay u badan tahay in ay "ku dhejiyaan" akhristaha, halkii qoraallada caadiga ah ee qoraalka ah. Taasi waa sababta su'aasha - meesha laga helo dib u soo celinta joornaalada - waxay ka dhigtaa dareen macquul ah. Haa, waa sax, sawiradu waxay natiijooyin fiican u keeni kartaa ganacsiga internetka. Dhamaan waxaad u baahan tahay inaad si feejigan u eegto waa inaad sameyso isku-dheelitir macquul ah oo ah xog muhiim ah iyo muuqaal muuqaal leh - aragti ahaan rafcaan ahaan, iyo bixinta macluumaad xiiso leh oo xiiso leh mowduuca saxda ah ee dhagaystayaasha saxda ah. Waxyaabaha kale ee jira - Inaad haysato habab wanaagsan oo laysku haleyn karo ayaa ka dhigaya waxyaabaha aad soo dhaweynayso si aad u qaaddo fayraska. Habkaasi, joornaalada wanaagsani waxay leeyihiin hufnaan qurux badan oo HQ ah, oo isla markaas kor u qaadaya boggaaga 'ama' blog 'ee horumarka SEO ee miisaanka. Sidaa darteed, xaggee laga helaa dib-u-celin laga soo qaado sawirrada? Ka hor inta aanan ku tusin liiska ilaha gaarka ah, taas oo aan ka bilowno qeexitaano aasaasi ah. Maxay yihiin dariiqooyinka ugu fiican? Waa kuwan saddexda qaybood oo muhiim ah oo samaynta mid kasta oo wanaagsan - qaab quruxsan, dhiirigelinta iyo ka warhaynta, iyo tirakoobyada cilmi baarista. Naqshaduhu waa sida ugu horeysa ee looga baahdo infakshanka kasta si loo bilaabo shaqada. Dhamaan waxaad u baahan tahay inaad tagto fayruuska leh jaantusyada waa sawir-qaadasho-rafcaan iyo taabasho naqshad xirfad leh.
Horumarinta iyo ka-qayb-qaadashada waxay u yihiin muhim u ah jaangoynta sida muuqaal la yaab leh iyo qiimaha dhabta ah ee ay bixiyaan tirakoobyada si fiican loo baaray. Iyadoo la tixraacayo in bannaanka aan loo dallacin habka saxda ah (i. e. , oo leh horumarinta warbaahinta saxda ah iyo tusaale ahaan wacyigalinta emailka), dadaalka intiisa kale wuxuu noqonayaa mid aan waxba tarayn, hubaal ahaan.
Isticmaal wanaagsan oo la falanqeeyay ayaa micnaheedu yahay in ilo kasta oo wanaagsani ay tahay inuu qaado qaar ka mid ah xogta qiimaha leh, sida tirakoobyada xiisaha leh, xaqiiqooyin dhif ah mawduuc la siiyey, aragti quruxsan, ama wax la mid ah jaantusyada baahsan ama sawirrada.
Halkaan waxaa laga helaa meesha dib loogu soo celiyo jaantuska hoose - waa liis ka kooban afar qaab ee ugu haboon ee laguugu talagalay oo kaa caawinaya sameynta midka koowaad:
Piktochart waa fudud -Waxay isticmaalaan qalab si ay u abuuraan xarfaha HQ ee dib-u-tayo sare leh. Samee fayruuskaaga fayruuska oo dhan si sahlan. Dhammaan waxaad u baahan tahay waa inaad maal gashato wakhti yar si aad u abuurto faafin ku-meel-gaadh ah oo sheegi karta "soo-dhaweyn" inaad wadaagto. Qorshaha bilaashka ah ee Piktochart wuxuu bixiyaa xal gaaban oo naqshadaysan, taasina waa sababta aad u diyaargarowdid iyo diyaar u tahay inaad ka shaqeysid waxyaabo badan oo ku saabsan sawirada tayada - waxaad si fiican uga fekereysaa helitaanka lacagta la siiyay.
Canva waa ilo kale oo wanaagsan oo kaa caawin kara inaad isticmaasho shsho naqshadeeysan oo bilaash ah. Way weyn yihiin! Faa'iido ka soo jiidashada farsamooyinka xirfadlayaasha ah si loo abuuro xitaa dhabo badan, hogaamiyaasha, saamiyada, iyo raacitaanka.
Venngage Infographics waa habka ugu fudud ee aad wax qabatey ee aad qiyaasi karto. Diyaarso fiican oo aad dooratid mid ka mid ah shanta boqol ee boqolkiiba oo xirfad-dejin leh oo xirfad-yaqaan ah - oo kaliya dhowr foori.
Fiverr waa ikhtiyaarka ugu dambeeyay ee loogu talagalay dadka raadinaya meesha dib loogu soo celiyo joornaalada. Fiverr waxay noqoneysaa inaad noqotid xalka ugu fiican, haddii aad rabto in aad heshid naqshadeynta muuqaalkaaga kuugu soo baxday - laga bilaabo 5 bucks si aad u tayo sare leh oo gaar ah loogu sameeyo boggaaga ama bloggaaga Source .